Duqeyn Culus Oo Saaka lagu Beegsaday saldhigga Turkiga ee Muqdisho
Saturday May 12, 2018 - 06:12:02 in Wararka by Super Admin
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho saaka oo Sabti ah ayaa xaqiijinaya in duqeymo culus lagu beegsaday saldhigga Milatari ee Turkigu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho iyadoona duqeymuhu in muddo ah ku socdeen gudaha saldhigga.
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in duqeymuhu billowdeen waabarigii hore ee saaka xilligaas oo Ciidamada Soomaalida ee tababarka ku qaadanaya xerada iyo Saraakiisha Turkigu ay heegan ku wada joogaan goobta tababarka.
Wararku waxey intaas ku darayaan in ilaa 13 madfac ay ku dhaceen gudaha saldhigga, waxaana mar qura wada damay leyrarkii ka shidnaa gudaha iyo bannaanka.
Wali ma cadda khasaaraha dhabta ah ee duqeymuhu geysteen, laakin waxaa la filayaa saacadaha soo socda in xog buuxda laga helo.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkan, waxaana uu noqonayaa midkii ugu horreeyay ee lagu beegsado saldhigga Milatari ee Turkiga tan iyo markii la daah furay bishii September ee sanadkii hore.
Hoggaanada Xarakada Al-Shabaab ayaa marar badan ku cel celiyay in maamulka Turkigu uusan waxba ka duwaneyn maamullada dabadhilifka ah ee ka arrimaha dalalka Islaamka, isla markaana ay xukuumadda Turkigu kaalin weyn ka qaadaneyso gulufka wadamada reer galbeedka ee ka dhanka ah Muslimiinta.
Sidoo kale Xarakada Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya uu qeyb ka yahay duullaanka wajiyada badan leh ee lagu soo qaaday Soomaaliya, waxaana la xusuustaa in sanaddii 2013-kii ay weerar Istish-haadi ah ku beegsadeen safaaradda Turkiga ee Muqdisho.